နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု (DWC): ၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ မည်သို့စတင်ရမည်နည်း - စနစ်များ
နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု (DWC): ၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ မည်သို့စတင်ရမည်နည်း
နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု (DWC) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
သငျသညျ Hydroponically အပင်ကြီးထွားလာဖို့အသစ်ကနေလျှင်, သူတို့ကသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေတူသော 'နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု' ကဲ့သို့စကားများမြည်နိုင်ပါတယ်။ မြေဆီဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Hydroponics သည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသော်လည်းကြည့်ရသည်မှာမလွယ်ကူပါ။
အမျိုးအစားများစွာရှိသည် Hydroponic စနစ်များ များစွာသော၎င်းတို့သည်မြုပ်နေသောအမည်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည် (အာဟာရရုပ်ရှင်နည်းစနစ်၊ ရေနက်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှု) ။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးအဘို့ဤအရပ်၌ကားအဘယ်သို့!
နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု (သို့) DWC - ယနေ့ရေအားလျှပ်စစ်ဥယျာဉ်၏အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကြည့်ကြပါစို့။
သငျသညျ (ငါကဲ့သို့) အမြင်အာရုံသင်ယူသူပိုမိုလျှင်သင်အောက်တွင်ငါ့ယူကျု့ချန်နယ်တွင်စုစည်းထားသောဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစနစ်အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုခြုံငုံသုံးသပ်သည်။
ကျနော်တို့က nitty gritty အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မရောက်မီ, ရဲ့ဒီအမျိုးအစား၏အဆင့်မြင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရကြကုန်အံ့။ DWC စနစ်တွင်အပင်တစ်ပင်၏အမြစ်များကိုရေနှင့်အာဟာရများပါ ၀ င်သောအောက်စီဂျင်ရှိသောအဖြေတစ်ခုတွင်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
အောက်စီဂျင် - အမြစ်များသည်မြေဆီလွှာထဲတွင်မဟုတ်ဘဲ (လေထုအတွင်းရှိအပေါက်များနှင့်တွင်းများရှိသည့်) မြေထဲတွင်မဟုတ်ဘဲရေကိုကောင်းစွာအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်စေရန်လိုအပ်သောကြောင့်အပင်သည်မနစ်ပါ။ ၎င်းကိုလေစုပ်စက်နှင့်လေကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ရေ - ဒီစနစ်ကိုမြေကြီးထဲမှာကြီးထွားနေပြီးသင်၏အပင်များကိုရေရှည်အစဉ်အမြဲရေလောင်းနေသည်ဟုယူမှတ်ပါ။ ဤအချက်ကရေအားလျှပ်စစ်စိုက်ပျိုးမှုသည်အလွန်အကျိုးရှိသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - သင်သည်ရေကို ထပ်မံ၍ မလိုအပ်တော့ပါ။
အာဟာရများ - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမြေဆီလွှာတွင်အပင်တစ်ပင်သည်ရှင်သန်ရန်နှင့်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့်အဏုနှင့်အာဟာရဓာတ်အားလုံးပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မြေဆီလွှာမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပင်များကြီးထွားရန်အတွက်အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝသောရေကိုအာဟာရများဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤနည်းအားနက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှုဟုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာသင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်တင့်သောရေပမာဏကိုသိုလှောင်နိုင်သောရေလှောင်ကန်ဖြင့်ကြီးထွားသည်။ ရေပိုများလေဆိုသည်မှာသင်၏အာဟာရဓာတ်များကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်၊
ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကရေထဲမှာမင်းဘယ်လောက်အမြစ်နစ်မြုပ်နေလဲဆိုတာပဲ။ အခြားနည်းလမ်းများကသင်၏စက်ရုံ၏အမြစ်ဇုန်ကိုလေနှင့်ထိတွေ့စေပြီးတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်မျှရေထဲရေထည့်နိုင်သည်။ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုစနစ်များ ဒီ) ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု၌, သင်၏စက်ရုံရဲ့အမြစ်စနစ်အများစု 24/7 နစ်မြုပ်နေသည် - ဤအရပ်မှနာမကိုအမှီ!
DWC စနစ်များသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ အဓိကတစ်ခုမှာ၎င်းတို့နှင့်စတင်ရန်အရိုးရှင်းဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူသည့်တစ်ခုတည်းသောစနစ်မှာ wicking စနစ်ဖြစ်သည်။
သင် set up တခါအလွန်နိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
မြေဆီလွှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားမှုအချိန် (ကျွန်ုပ်သည်မြေဆီလွှာတွင် ၆၀ အစားရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းရိတ်သိမ်းရန်ဆလတ်ရိတ်သိမ်းသည်)
သို့သော်၎င်းသည်နေရောင်ခြည်နှင့်နှင်းဆီအားလုံးမဟုတ်ပါ။ သင့်အားပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သောဤစနစ်အမျိုးအစားနှင့်ပြissuesနာအချို့ရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားလျှင်၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်
သေးငယ်သောစနစ်များတွင် pH၊ ရေနှင့်အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုသည်အလွန်အမင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်
သင့်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း (သို့) pump pump ပျက်သွားပါကသင်၏အမြစ်များသည်အောက်စီဂျင်နည်းသောအာဟာရဓာတ်များထဲမှာနစ်နေနိုင်သည်
နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှု (DWC) စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်။
ရိုးရာ DWC များသည်တည်ဆောက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်အပိုင်းများစာရင်း။
လေကြောင်းလိုင်းပြွန် အမေဇုံသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင် စျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပါ
အမေဇုံသို့မဟုတ် Hydro စတိုး
pH ကိုထိန်းချုပ်ရေး Kit
နည်းစနစ်မှာရိုးရှင်းပါသည်။ စုပ်စက်ကို Tubing နှင့် ဆက်သွယ်၍ Tube ကို airstone သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ရေပုံးကိုရေနှင့်ဖြည့်ရမည်။ စနစ်တကျ pH နှင့်သင်၏အာဟာရထည့်ပါ နှင့် အစေ့ကိုကြဲလော့ ။
အောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရကြွယ်ဝသောဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ရိုးရာ DWC စနစ်တွင်စိုက်ပျိုးသောအပင်များသည်ပုံမှန်မြေဆီလွှာစိုက်ပျိုးသည့်အပင်များထက်နှစ်ဆမြန်နိုင်သည်။ ငါအပင်ပေါက်ရန်အတွက်မှရက်ပေါင်း 30 အတွင်းငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆလတ်၏ ဦး ခေါင်းရိတ်
ငါမြေဆီလွှာတွင်ဆလတ်စိုက်ပျိုးဖူးသမျှအမြန်ဆုံးသည်ရက်ပေါင်း ၆၀ ဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျနည်းသည်အစပြုသူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ system ကိုနောက်အဆင့်သို့ချဲ့လိုလျှင်ကော။ လူအများစုသည်ဥယျာဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုပါက RDWC (သို့) Deep Water Culture system သို့ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။
သငျသညျစကေးမှာကြီးထွားဖို့ရှာနေလျှင်, သင်လုပ်ချင်သောနောက်ဆုံးအရာ 10 တစ် ဦး ချင်းစီပုံးရှိသည်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရေပုံး ၁၀ ခုနှင့်အတူတူပင်စက်ရုံတစ်ပင်ကိုကြီးထွားနေပါကအဓိကရေလှောင်ကန်တစ်ခုရှိခြင်းနှင့်ရေပုံး ၁၀ ခုလုံးတွင်ထိုအာဟာရဓာတ်များကိုအစာကျွေးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်မဟုတ်လော။
ဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုပါက RDWC စနစ်ကိုတီထွင်လိုက်သည်။
သငျသညျတစ် ဦး ချင်းစီသော pH နှင့်ဤပုံးတစ်ခုချင်းစီကိုချိန်ညှိချင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်ချင်ပါတယ်!
သင်ပုံးအမြောက်အများအတူတကွချည်နှောင်ပါကရေ၏အောက်စီဂျင်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ရေပုံးတစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားအာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်မှုသည်မတတ်စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ရေပုံးတစ်ခုချင်းစီအတွက် airstone system ကိုအသုံးပြုရန်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
နာမတော်၏ recirculating တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကစားသို့ရောက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ရေသည်ရေပုံးမှရေပုံးသို့ရွေ့သွားသည်နှင့်၎င်းသည်ရေကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြန်းသောရေမှုန်ရေမွှားများမှတဆင့်လှည့်ပတ်သည်။
ဒီ DWC စနစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၏အလှမှာသင်အလယ်အလတ်တည်နေရာတစ်ခုမှရေများထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့်ရေဖြည့်တင်းခြင်းသာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်ရေပုံးအားလုံးသို့ချက်ချင်းကျွေးမွေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုက power grid ဖြစ်တယ်။ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မီးစက်တွေကိုအိမ်တွေမှာမထားဘူး။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်ဗဟိုနေရာများမှထုတ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှတဆင့်ထုတ်လွှတ်သည်။
Bubbleponics သည် DWC နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုလူအများစုကမယူဆသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အားသာချက်များအနည်းငယ်ရှိပြီးစကားပြောရန်လုံလောက်သောအရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထင်မြင်သည်။ ၎င်း၏မိုက်မဲသောအမည်ဖြင့်နေသော်လည်း, Bubbleponics စေသည်လိုက်လျောညီထွေရိုးရှင်းပါသည်။
သင်၏စက်ရုံများအပင်ပေါက်ရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းမည့်အစားသင်၏ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိအမြစ်များကိုထိတွေ့စေမည့်အရာသည် Bubbleponics သည်ပထမအပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏အပင်များကိုအာဟာရဓာတ်များဖြည့်တင်းပေးခြင်းဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားလုံးသည်စက်ထဲသို့ရေစုပ်စက်တစ်ခုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ရုံများထိုင်နေသောပိုက်ကွန်ထဲသို့တင့်ကားထဲမှယိုလိုင်းများစီးထွက်နေသည်။ ရိုးရှင်းသော်လည်းအပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှင့်ပျိုးပင်အဆင့်ကိုအရှိန်မြှင့်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည် အပင်တစ်ပင်၏ဘဝသံသရာ၏။
ဘယ်မှာ reel mower ကိုဝယ်ရမလဲ
ကုမ္ပဏီများသည် Hydroponic အာဟာရအမျိုးမျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွက်ဆရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့စတင်ခြင်းကအကောင်းဆုံး အထွေထွေ Hydroponics Flora စီးရီး ။ ၎င်းသည်သင်၏စက်ရုံ၏ကြီးထွားမှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောပမာဏများ၌သင်ရောနှောစေသောအပိုင်းသုံးပိုင်း Hydroponic အာဟာရဖြစ်သည်။
အနည်းကိန်းသို့မဟုတ် modular စနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား။
သင်စတင်ထွက်ခွာသွားပါကရေလှောင်ကန်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူသွားပါ။ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တည်ဆောက်နိုင်သည် စျေးကွက်တွင်များစွာသောထဲကတစ်ခုဝယ်ပါ ။ modular DWC စနစ်သည်မိမိကြီးထွားလိုသည့်အရာနှင့်မည်မျှကြီးထွားချင်သည်ကိုအတိအကျသိသောစိုက်ပျိုးသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အတွေ့အကြုံပိုရလာသည်နှင့်အမျှအသေးစားစတင်ပါ။
ဒါကဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်မမေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သော Hydroponic ဥယျာဉ်မှူးများသည်သူတို့၏ရေလှောင်ကန်ကိုမြုံစေလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ရေညှိများကဲ့သို့သော Hydroponic ဥယျာဉ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောဇီဝညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်အကျိုးရှိသောဘက်တီးရီးယားများ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ရေလှောင်ကန်ထဲသို့အကျိုးရှိသောဇီဝဗေဒကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းသည်မစီးဆင်းသောဇီဝသက်ရှိများကိုစီးနင်းရန်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်၏ pH နှင့် PPM / EC သည် DWC အတွက်မည်သို့ဖြစ်သင့်သနည်း။
သင်သည်နက်ရှိုင်းသောရေယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွင်ကြီးထွားနေခြင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏ pH နှင့် PPM / EC ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အပင်အများစု (pH 5.5-6.5) ပိုနှစ်သက်သောစံသတ်မှတ်ချက်သည်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်သင်၏အပင်များမည်သည့်ကြီးထွားမှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သူတို့သည်အသီးအရွက်များစိုက်ပျိုးသောအခါသင်၏ pH ကိုထိန်းသိမ်းထားလိုသည် အဲဒီအကွာအဝေးရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာသူတို့ပန်းပွင့်တဲ့အခါမှာအနိမ့်ဆုံး။
သင်၏ PPM / EC အနေဖြင့်သင်၏ Hydroponic nutrients ၏နောက်ကျောတွင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုမျက်စိကန်းစွာမလိုက်နာပါနှင့်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်လိုအပ်သောထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ပမာဏကိုထက်ဝက်လျှော့ချပြီးသင်၏အပင်များမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သင်၏အပင်များသည်အာဟာရဓာတ်များလောင်ကျွမ်းနေသောကြောင့်အပင်ကိုလျှင်မြန်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဘယ်လိုကြီးထွားလာသောတဲကို set up ဖို့
၎င်းသည်ရေနက်ယဉ်ကျေးမှု၏ဆိုးကျိုးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ရေလှောင်ကန်၏အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ ၆၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ထက်မပိုသောရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ သင်ပိုမိုမြင့်မားလာပါကသင်၏ရေထဲရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏသည်ကျဆင်းသွားသည် (သင်နှင့်အတူအောက်စီဂျင်ဓာတ်ပြုပြီးသော်လည်း) လေစုပ်စက် နှင့် လေထုကျောက် ) ။
၎င်းကို ၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထက်တွင်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ နိမ့်ကျသွားလျှင်သင်၏စက်ရုံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆောင်း ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီသို့ပြောင်းရွေ့နေပြီဟုထင်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်မလိုချင်သောပန်းပွင့်ဆီသို့စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာမည်ဟုစတင်ဆိုလိုသည်။
အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပါကမှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်အာဟာရရှိသောအရောအနှောအချို့ကိုရောစပ်။ ရေထည့်နိုင်သည်။ အပြည့်အစုံပြောင်းလဲခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပျော်သောအောက်စီဂျင်မီတာ ရောင်းရန်ရရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်စျေးကြီးပြီးသင်အလွန်တိကျလိုလျှင်မဟုတ်လျှင်အလွန်အကျွံသတ်ဖြတ်နိုင်သည်။ ငါသော်လည်းနိမ့်အဆုံးတစ်ခုဝယ်ယူရန်အကြံပြုမဟုတ်ဘူး - သူတို့ကအရမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ပျော်ဝင်နေသောအောက်စီဂျင်အဆင့်များကို“ စောင့်ကြည့်” ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအဆင့်များအားကောင်းမွန်စွာသေချာစေရန်လုပ်ခြင်းသည်ဖြေရှင်းချက်ကိုမှန်ကန်သောအပူချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သင်၏လေစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ DWC ရေလှောင်ကန်နှင့်အာဟာရဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များတွင်အမြစ်မည်မျှကိုနစ်မြုပ်သင့်သနည်း။
ဦး ဆုံးအနေနှင့်သင်၏အာဟာရဓာတ်များကိုအမြစ်ကိုသာနစ်မြှုပ်ထားရန်သေချာစေပါ။ သငျသညျဖြစ်စေ, လုံးဝအမြစ်နစ်မြုပ်ချင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သည် ၁-၁.၅.၅ root ပတ်ပတ်လည်တွင်အမြစ်ကို line ရေစီးမျဉ်းအထက်တွင်ထားရှိသည်။ လေထုကျောက်မှပူဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ရေသည်မနစ်မြုပ်သောအမြစ်ပေါ်သို့ကျရောက်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုခြောက်သွေ့သွားမည်ကိုသင်စိတ်မပူပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်၏ DWC စနစ်တွင်မီဒီယာကြီးထွားမှုကိုအသုံးမပြုလိုလျှင်အပင်များကိုမည်သို့ဖြန့်ဝေမည်နည်း။
လွယ်ကူပါတယ် - တစ်ခုကိုသုံးပါ aeroponic Cloner ။ မင်းပိုက်ဆံချွေတာမယ် ကြီးထွားလာမီဒီယာ နှင့်သင်ပြန့်ပွားစေသောအပင်များသည်သင်၏ DWC သို့အစားထိုးသောအခါအမြစ်တွယ်သာရှိသည်
သော pH သို့မဟုတ် PPM / EC / TDS တွင်လျင်မြန်စွာအတက်အကျ
သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေပါက DWC စနစ် (သို့မဟုတ် Hydroponic systems အများစု) တွင်စိုက်ပျိုးသောအပင်များသည်အနည်းဆုံး ၁၅% ပိုမိုကြီးထွားလာမည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆလတ်သည်ကျွန်ုပ်၏အပြင်ပန်းဥယျာဉ်ထက်ရေနက်ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်မှုတွင်နှစ်ဆလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါသိသာအဖြေပန်းပွင့်ရန်ရှိသည်ပါဘူးဘာမှဖြစ်ပါတယ်။ ဆလတ်မျိုးစုံနှင့်အမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာသည် DWC တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အလွန်လျင်မြန်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကြောင့်သူတို့ကိုထူးကဲသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ၊ ငရုတ်ကောင်းတွေ၊ ပြီးတော့ squash လိုမျိုးပိုကြီးတဲ့အသီးတွေကိုလည်းသင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ DWC စိုက်ပျိုးသူများသည်အမြစ်ဇုန်အတွင်းရှိအစိုဓာတ်ပမာဏကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အလှည့်ကျခြင်းနှင့်ပန်းပွင့်စသည့်အပင်များတုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခြောက်သွေ့သောအမြစ်ဇုန်သည်မွှေးကြိုင်သောရနံ့နှင့်နံ့သာကဲ့သို့သောမွှေးကြိုင်သောသီးနှံများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ (၎င်းတို့သည်ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ) စိုစွတ်သောအမြစ်ဇုန်သည်အပင်များကိုအပင်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပန်ကာအရွက်ကြီးများကိုအာရုံစိုက်စေပြီးအလှည့်သည် transpiration နှင့် photosynthetic အလားအလာကိုမြန်စေသည်။
at မှာဒေးဗစ် Offutt ၏ဓါတ်ပုံကိုယဉ်ကျေး gastronomic ဥယျာဉ်မှူး ။
ဥယျာဉ်၌အုန်းသီး coir သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို